वीएन्डसीले मेडिकल कलेजको अनुमति पाउँदै « Loktantrapost
वीएन्डसीले मेडिकल कलेजको अनुमति पाउँदै
१७ जेष्ठ २०७४, बुधबार ०९:४५
विर्तामोड । सरकारले पूर्वकै सुविधासम्पन्न एवम् पूर्वाधारयुक्त बीएन्डसी हस्पिटललाई मेडिकल कलेजको सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको हस्पिटलले जनाएको छ ।
झापाको विर्तामोडमा रहेको यस हस्पिटलले मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति पाउनका लागि तोकिएका सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण गरी धेरै लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएको छ ।
विगतमा नागरिक अगुवा डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनका कारण बीएन्डसीलाई सरकारले मेडिकल कलेजको सञ्चालन अनुमति दिन सकिरहेको थिएन ।
हस्पिटलका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाइँले आगामी साता नै सरकारबाट सञ्चालन अनुमति प्राप्त हुने दावी गरेका छन् ।
‘सबै प्रक्रिया मिलिसकेको छ, अब एक साताभित्रै पत्र आउँदै छ’, हस्पिटलका कार्यकारी निर्देशक प्रसाइँ भन्छन्–‘मेडिकल कलेज बन्नबाट कसैले रोकेर अब रोकिनेवाला छैन ।’
डा. गोविन्द केसी समेत वीएन्डसी हस्पिटललाई मेडिकल कलेज दिने कुरामा कन्भिन्स भइसकेको प्रसाईले दावी गरेका छन् । भन्छन्–‘सुरुमा उहाँ अन्योलमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले क्लियर हुनुभएको छ ।’
डा. केसीको पक्षमा वकालत गर्दै आएका राजधानीका मेन स्ट्रीमका केही मिडियाका पत्रकारहरुले हालै बीएन्डसी हस्पिटलको निरीक्षण गरेर गएको जानकारी दिदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र डा. केसीविच बीएन्डसी हस्पिटललाई मेडिकल कलेजको सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने विषयमा कुराकानी भइसकेको समेत प्रसाईले बताए ।
बीएन्डसी हस्पिटलले पूर्वमै सबैभन्दा बढी पूर्वाधारयुक्त अस्पताल र कलेजका लागि छुट्टाछुट्टै भवन निर्माण गरिसकेको छ भने मेची अञ्चलमा एउटा मेडिकल कलेजले अनुमति पाउनु पर्छ भन्नेमा व्यापक जनमत समेत तयार भएको छ । यही कारण सरकारले सञ्चालनको अनुमति दिने अन्तिम तयारी गरेको हो ।
मेडिकल कलेज सञ्चालनकै लागि भनेर वीएन्डसी हस्पिटलले हाल दैनिक लाखौँ घाटा व्यहोरेर भए पनि हस्पिटल चलाएको छ । जसका कारण मेची अञ्चलबासीले भारतको सिलगढी र काठमाडौँसम्म धाइरहनु परेको छैन । एमआरआई लगायतका उच्च प्रविधि यसैले भित्र्याएको छ ।
वीएन्डसी हस्पिटलले मेडिकल कलेजको मान्यता पाउँदा झापा जिल्लाको विकासले एउटा फड्को मारेको मानिने छ । यसबाट हाल महङ्गो भएको गुनासो आइरहेको वीएन्डसी हस्पिटलकै उपचार सेवा र सुविधा पनि सस्तिने अनुमान गरिएको छ ।
पूर्वमै पहिलोपल्ट ग्यास्ट्रेइन्टेरोलोजी
विर्तामोड । वीएन्डसी हस्पिटलले पूर्वमै पहिलोपल्ट ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजी उपचार सेवा सुरु गरेको छ ।
यस हस्पिटलमा यस अघि १९ वटा विभाग सञ्चालनमा थिए । एक सातादेखि २० औँ विभागको रुपमा ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजी थपिएको छ ।
मुख, खानेनली, पेट, आन्द्रा, हेपाटाइटिस, कलेजो लगायतका समस्यामा विषयविज्ञ उपचार सेवा प्रदान गर्नका लागि ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजीमा एमडी गरेका डा. हरि घिमिरे वीएन्डसी आएका छन् ।
पाकिस्तानको लाहोरबाट एमडी गरेका उनले नेपालमा सबैभन्दा बढी रोग यही विभागमा आउने गरेको बताएका छन् । त्यसमध्ये कलेजोको सिरोसिस हुने समस्या जटिल मानिन्छ ।
बढी अल्कोहल सेवन गर्नाले अल्कोहलिक सिरोसिसका रोगी बढेको उल्लेख गर्दै डा. घिमिरेले उपचारका लागि आवश्यक पर्ने अत्याधुनिक उपकरण र प्रयोगशाला देखेर नै वीएन्डसी हस्पिटलमा आउने आफुले निर्णय गरेको बताए ।
प्राय हस्पिटलहरुमा यस्ता विरामी फिजिसियनले नै हेर्दै आएको बताउँदै हस्पिटलका जनसम्पर्क अधिकृत प्रमिश गिरीले पेट, मुख, अन्ननली, आन्द्रा र कलेजोसम्बन्धी जुनसुकै रोगको पनि अब बीएन्डसीमै उपचार सम्भव हुने जानकारी दिए ।